PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: January 2013
KIA နှင့် အစိုးရတို့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲ
မြန်မာ့အကြွေး ဒေါ်လာသန်း သုံးထောင့် ငါးရာကျော်ကို ဂ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအလံများကို ကိုင်ဆောင်၍ စစ်ပွဲများ ရပ...
သတင်းမှတ်တမ်းယူသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတဦး ပြည်နှင်ခံရ
ဦးရဲထွဋ်အနေနဲ့ အောက်ခြေအထိ ကွင်းဆင်း လေ့လာပါ
ယာဉ်ထိန်းရဲများ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြုလုပ်ပါက တိုင်ကြာ...
ဓါတုလက်နက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော မီးလောင်ဗုံးများ ...
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာက ဖြတ်ကပ်ညှပ်ဓာတ်ပုံ မြန်မာ့အ...
ကချင်ဒေသတွင် အဓမ္မုနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန်ြ...
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ သူတို့ပြောပြချက်
ကချင်ရွာထဲသို့ လက်နက်ကြီးကျ၊ ၂ ဦးသေ
လယ်သမား တွေကို ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စားခိုင်းတဲ့ ၀န်ြ...
Hka Ya Bum စခန်းတိုက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် စစ်မြေပြင် နောက...
Green Foundationမှ ဘက်ထရီမီးထွန်းစက် တစ်ထောင်လှူ
Tu Maung Nyo - General and USDP Congressman on the...
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးရွေးကောက်...
“တံတားဦးမြို့နယ် NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်...
ဝ'တပ်ဖွဲ့၏ ဖိတ်ခေါ်မှု KIO လက်ခံကြောင်း ပြန်ကြား
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများ ဖြိုခွင်းခံရခြင်း ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီယား အထူးအိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ လီမြောင်ဘ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ မိတ်ဆွေတု မိတ်ဆွေယောင်
ကိုရီးယား ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း အတွက် မြန်မာလုပ်သား ၄၉...
လိုင်ဇာကို သိမ်းရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်လို့ ...
အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ဆန်းမှာ ဆွေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယား ခရီးစဉ်ရောက်ရှိ
ကချင်ပဋိပက္ခ နဲ့ UNFC အခန်းကဏ္ဍ
" ဒီမိုကရေစီရဲ့ အဓိပ္ပာယ် "
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင် တရုတ်မှာ ယာယီထိန်းသိမ...
သင်္ဃန်းကျွန်း မိချောင်းကန်က မူလမြေပိုင်ရှင်တွေ ရှင်...
ဖွတ်ပါတီရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထား
(၆၆)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားခြင်း
လဂျားယန် နဲ့ လိုင်ဇာ ကြား လ၀ါးယန်ရွာထိပ်မှာ ဒီနေ့ ...
ဟာဝါအီ သတင်းရုပ်သံပေါ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နော်ဝေး ၊ဆန္နပြပွဲ မှ ရှေ့နေခွန်ဆာ
ရှမ်း/မြောက်တွင် ပြည်သူ့စစ်များ ဗမာစစ်တပ်နှင့် တို...
သက်တော်ရှည် ၀န်ကြီးတစ်ယောက်အကြောင်း တစေ့တစောင်း
အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲရုပ်သံ
ကချင်စစ်ပွဲရပ်ရေး ဇင်းမယ်မှာ ဆန္ဒပြ
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အလှမ်းဝေးနေအုံးမည့် ပြ...
လေကြောင်းမှ ဗုံးပဒေသာများဖြစ် ခါယာဘုန် တောင်ကုန်းတ...
၀မ်းနည်းစွာ ဟစ်ကြွေးနေတဲ ကလေးတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး...
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့နယ်၌ တပတ်အတွင်း တိ...
အကောက်ခွန်ဦးစီး ဌာနမှ ဝန်ထမ်း ၃၃ ဦးအား အရေးယူမြှု...
"ကူညီဖို့ မကြောက်အောင် ကူညီကြပါ"
အရေးပါတဲ့ ကချင် တောင်ကုန်း အစိုးရတပ်တွေသိမ်းပိုက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် East-West Center မိန့် ခွန်း(ရု...
အမြောက်ကျည်ဆံများ ထောင်နှင့်ချီ အပစ်ခတ် ခံနေရသည့် ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ (ICRC) ဥက္ကဌ ဦးေ...
အူဗျစ်ရွာ နှင့် အာလမ်ရွာ တို့မှ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ...
အိမ်ခြေ (၁၀၀၀) ကျော်ရှိ နန်ဆန်ယန်ကျေးရွာ ဗမာအစိုးရ...
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မြန်မာဒုက္ခသည်များ ခေါ်ယူရေး ...
ညောင်တုန်းမြို့တွင် တရားဥပဒေနှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွ...
ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲအခြေအနေ BBC သတင်းရုပ်သံ မှ ထုတ်...
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနယ်စပ် န.စ.က အဖွဲ့ပိုင် ကားတ...
"တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပွဲေ...
ငန်းမြွေကို ဂူထဲကနေထွက်လာအောင် ခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ြ...
မတရား အဖမ်းဆီးခံထားရသော သနပ်ပင်မြို့မှ လယ်သမားကြီး...
ခါယာတောင်ကျော သိမ်းပိုက်ရေး စစ်ဆင်မှု ယနေ့ထိမအောင်...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်သူများ ဒိုက်ဦးမြို...
( ´ ▽ ` ) အရမ်းကို ကြိုက်တဲ မှတ်ချက်လေးပါ ( ´ ▽ ` )
မြန်မာ အတိုက်အခံများ အစိုးရလုပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ကြပြီလား
ပြည်ထောင်စုနေ့အမီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲနိုင်မလား
ကချင် လူထုအပေါ် မြန်မာ စစ်တပ်၏ ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်မှူ
ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည့် မိန်း...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယားခရီးစဉ် ဂျပန်ထက်စောခြင...
ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ငေ...
ခါယာ တောင်တန်း၏ ခံစားချက်နှင့် KIA ၏ ကံကြမ္မာ တိုက်ပွဲ
၂၀၀၇ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုစည်သူမောင် ...
လိုင်ဇာအနီး ခါယာဘွမ် တောင်ကုန်းကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ...
လိုင်ဇာကို ကချင်ပြည်နယ် မြို့တော်လို့ ဆိုတဲ့ CCTV
ကလေးငယ်တွေမှာ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမားရေးအတွက် အကူအညီတွေ...
ကချင်ကို အပြတ်တိုက်ဖို့ကို အားလုံးလိုလိုက သဘောတူဆံ...
ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲများအပေါ် US က ပြင်းထန်စွာ ကန့်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယား ခရီးစဉ် ပူးပေါင်းဆောင...
အစိုးရတပ်က ပစ္စည်းလု၊ သတ်ဖြတ်မှုများရှိနေသည်ဟု ကျေးရ...
တပ်ရဲ့ လုံခြုံရေး ကွန်ယက် ဇကာပေါက်ကြီးကို တပ်ချုပ်...
ဗိုလ်ရွှေမန်းကို မလွန်ဆန်နိုင်သူ ဗိုလ်သိန်းစိန် (Tu...
နေပြည်တော် ဆေးရုံလေးရုံ စီမံကိန်းသည် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ဖြ...
အစိုးရတပ်မှ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရှိရာနေရာအ...
စီမံကိန်းထိခိုက်မည်ဆိုလျှင် ဝမ်ဘောင်က မြန်မာအစိုးရ...
RCSS က ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်မူကို ကျင့်သုံးမည်
ကြေးနီတောင် စီမံကိန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲ ရန်ကုန်...
ကချင်ဌာနချုပ် လိုင်ဇာအနီး တိုက်ပွဲတွေ ဆက်လက် ပစ်ခတ...
ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PSLO/PSLA၏ အနှစ်(...
သမ္မတ အိုဘားမား၏ အဖိုးတန်စကား
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ချစားမှု နေပြည်တော်မှာ...
ဒိန်းမတ် သတင်းထောက်မှ ကချင်စစ်ပွဲသို့ကိုယ်တိုင်သ...
အစိုးရနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အရပ်ဘက်ပစ်မှတ်တွေ...
ဇန်န၀ါရီလ (၃၁) ၂၀၁၃။
ယမာန့်နေ့ ညနေ (၅) နာရီ အချိန်တွင် အစိုးရ၏ အမှတ် (၇) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့နှင့် KIA တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၆) တပ်ခွဲ အဖွဲ့...နှင့် ဖါးကန့်မြို့နယ် ဂွေခါကျေးရွာ အနီးတွင် မိနစ်(၃၀)ခန့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရ တပ်များ နောက်ဆုတ် ပေးခဲ့ရသည်ဟု KIA တပ်ရင်း (၆) တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အင်ခွန်ဇော်တွဲက ဆိုပါသည်။
“ အစိုးရတပ်က အမြဲတမ်း လိုက်တိုက်နေတာ့ ရှောင်လေ လာရှုပ်လေဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ဖက်က သီး မခံနိုင်တော့လို့ တပွဲခံ ချလိုက်တာပါ။ ဒီတော့ ဒီပွဲမှာ အထိနာ သွားပုံရပါတယ်။ အဝေးဆုံးကို နောက်ဆုတ်သွားလိုက်တာပါဘဲ။” ဟုဆိုပါသည်။
ဤတိုက်ပွဲသည် KIA တပ်ရင်း (၆) လက်အောက်ခံ ညောင်ထောက်စခန်းမှ တပ်ခွဲ (၅) တပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်ကြောင်း (၃)ကြောင်း ဖြင့် အင်း (၄၀၀) ခန့်ရှိသော ကယားပြည်နယ် အခြေစိုက် အစိုးရ၏ အမှတ်(၇)စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (စကခ ၇) တပ်ဖွဲ့များ အနက်မှ အင်အား(၁၀၀) ခန့် ရှိသည့် စစ်ကြောင်းတို့
Posted by PNSjapan at 11:50 PM0comments
လေသန့်ဗူးတွေ ကိုယ်တိုင် လိုက်ဝေပေးနေတဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ချန်
လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ တနေ့ထက်တနေ့ များများလာနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ သန့်ရှင်းတဲ့လေကို ရှုရှိုက်ဖို့အရေး အခက်တွေ့ရတဲ့ ဒုက္ခတွေ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတော့မယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ဖျားစွန်းက လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ လေတွေထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ အချိုရည်ဗူးအရွယ် လေသန့်ဗူးလေးတွေကို တရုတ်နိုင်ငံကျော် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ချန်ဂွမ်းပေါင်က တီထွင်ပြီး စဖြန့်တဲ့နေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပီကျင်းမြို့လယ်ကောင်မှာ သူကိုယ်တိုင် အခမဲ့လိုက်ဝေပါတယ်။
ဒီလေသန့်ဗူးတွေကို တီထွင်ရတာဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အထူးသဖြင့် ပီကျင်းမြို့မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေ တအားများနေတာကို လူတွေ သတိပြုမိဖို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဟာ အရေးကြီးတယ်ဆ်ိုတာ ပြချင်လို့၊ အစိုးရအနေနဲ့ကလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လေထု သန့်ရှင်းရေး
Posted by PNSjapan at 11:43 PM0comments
မြန်မာ့အကြွေး ဒေါ်လာသန်း သုံးထောင့် ငါးရာကျော်ကို ဂျပန်က လျော်ပစ်လိုက်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး ကြိုးပမ်းမှု၊ စီးပွါးရေးနဲ့ လူမှုရေးပြောင်းလဲ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အားပေး ကူညီတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရထံက ရစရာရှိတဲ့ ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၅၈ဝ ကို ဂျပန်နိုင်ငံ လျော်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျပန်သံရုံးရဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက်နေ့ ကြေညာချက်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက် ပံ့ပိုးဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရက ယုံကြည်တဲ့အတွက် အကူအညီတွေ ကျယ်ကျယ် ပျံ့ပျံ့ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ အထောက်အပံ့တွေ ရရှိရေး အတွက်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံက ဆက်လက် ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Copy from - rfa.org/
Posted by PNSjapan at 3:22 PM0comments
ငြိမ်းချမ်းရေးအလံများကို ကိုင်ဆောင်၍ စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု မုံရွာမြို့မှ လိုင်ဇာမြို့သို့ စတင်ထွက်ခွာ
photo by - The Voice Weekly
စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှုအနေဖြင့် မုံရွာမြို့ခံအချို့ စုပေါင်းကာ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့သို့ ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် စတင်ထွက်ခွာ သွားပြီဟု သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ အဖွဲ့သည် ငြိမ်းချမ်းရေးအလံများကို ကိုင်ဆောင်၍ မုံရွာမြို့ ပေါ်တော်မူစေတီရှေ့မှ ထွက်ခွာသွားပြီး သံဃာတော် တစ်ပါး အပါအ၀င် ၅ ဦးပါဝင်ကြောင်း 7Day News မုံရွာ သတင်းထောက်က သတင်းပို့သည်။ ထို့ပြင် မြင်းမူ၊ ချောင်းဦး၊ မန္တလေးတို့မှ လိုက်ပါရန် စောင့်ဆိုင်း နေသူများနှင့် ပူးပေါင်းမည်ဟု သိရသည်။
Copy from - 7Day News Journal
Posted by PNSjapan at 3:06 PM0comments
ရန်ကုန်မြို့မှ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့နယ်အထိ ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက် နေသူများနှင့် လိုက်ပါ၍ သတင်းမှတ်တမ်း ရယူသည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံသားတဦးကို ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တောင်ငူမြို့နယ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများ အကြောင်း လိုက်လံ မှတ်တမ်းယူနေသော ပြင်သစ်နိုင်ငံသား Mr. Christofa ဆိုသူကို ယနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များက သူတည်းခိုနေရာ တောင်ငူမြို့ အမေ့အိမ် တည်းခိုခန်းမှ လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှတဆင့် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူ တဦးဖြစ်သည့် မမြနန္ဒာက ပြောသည်။
တောင်ငူခရိုင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဗကသကျောင်းသားများ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျောက်အဖွဲအား ကြိုဆို နှုတ်ဆက် အားပေးနေပုံ
“ပြင်သစ်နိုင်ငံသားက မနေ့ကတည်းက ကျွဲပွဲကနေ တောင်ငူအထိ တနေကုန် သတင်းမှတ်တမ်း လိုက်ယူတယ်။ ကျမတို့ကိုလည်း သူက အင်တာဗျူးတွေ ဘာတွေ လုပ်တယ်။ သူက ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့အထိ ဗီဇာ ရထားပြီးသားလို့ ပြောတယ်။ ဗီဇာကတော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဗီဇာအမျိုးအစား၊ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှာ သူတည်းနေတဲ့ ဟိုတယ်ကနေ တောင်ငူမြို့နယ် လ၀ကမှူး ဦးစန်းဝင်းနဲ့
Posted by PNSjapan at 2:58 PM0comments
ဆရာ ဦးရဲထွဋ် ခင်ဗျား -
သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံက ကျွန်တော်တို့ သတင်းစာက သတင်းထောက်နဲ့ အယ်ဒီတာတွေ ရေးသား ဖော်ပြထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းရော ဓာတ်ပုံပါ သတင်းစဉ်ဆိုတဲ့ ဌာနက ပို့တာကို သတင်းစာတိုက်များက မထည့်မနေရ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆရာ ဦးရဲထွဋ် ပြန်လည်ဖြေကြားပုံက သတင်းစာတိုက်က သတင်းထောက်တွေ အယ်ဒီတာတွေ ညံ့ဖျင်းပြီး မစိစစ်ဘဲ ဖော်ပြထားတာမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီပြောကြားချက်ကို လုံးဝ လက်မခံ ပါဘူး။ သတင်းစာကို သတင်းစဉ်က ရာနှုန်းပြည့် လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ် ချုပ်ကိုင်ထားပြီး သတင်းမှားတိုင် ပုံမှားတိုင်း သတင်းစာတိုက်က အယ်ဒီတာတွေ သတင်းထောက်တွေ ပေါ့လျော့မှုလို့ ပြောနေတာက လုံးဝ မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဒုဝန်ကြီး တစ်ဦးအနေနဲ့ အမှန်တကယ် မသိတာလား သိရဲ့သားနဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ သတင်းစာတိုက်က လူတွေကြား ထင်မြင် လွဲမှားအောင် လုပ်နေတာလားဆိုတာ စဥ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ သတင်းစဉ်ရဲ့ အမှားတွေကို သတင်းစာတိုက်က မြင်လို့ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိသလို သတင်းစဉ်မှ ဗိုလ်ပြုတ်များရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် များသာ အမှန်ဟု အတင်းအဓ္ဓမ စီရင်ဆုံးဖြတ်နေတာကလဲ လုံးဝကို မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ ခင်ဗျာ။ ဆရာ ဦးရဲထွဋ်အနေနဲ့ အောက်ခြေအထိ ကွင်းဆင်း လေ့လာ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
( Kyaw Zeyar Myint )
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာက ဖြတ်ကပ်ညှပ်ဓာတ်ပုံ ဖော်ပြမှု ဦးရဲထွဋ် ဖြေရှင်းချက်http://blog.irrawaddy.org/2013/01/blog-post_811.html
Posted by PNSjapan at 2:44 PM0comments
ယာဉ်ထိန်းရဲများ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြုလုပ်ပါက တိုင်ကြားနိုင်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရှိ ယာဉ်ထိန်းရဲများ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူ ပြုလုပ်ပါက တိုင်ကြားနိုင် တယ်လို့ ယခုလ အတွင်းက ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက် အရ သိရပါတယ်။ လက်ရှိ မှာတော့ အဆိုပါ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားမှုများ မရှိ တဲ့အတွက် တိုင်ကြား လိုသူတွေမှ တိုင်ကြား နိုင်ဖို့ ပြောကြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ အတွက် တိုင်းကြားချက် တွေရှိခဲ့ရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ရဲလက်စွဲ ဥပဒေများ အရ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးသည်တင် ကားများမှ ပိုက်ဆံများ ပစ်ချပေး ရင်တော့
Posted by PNSjapan at 2:36 PM0comments
ဓါတုလက်နက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော မီးလောင်ဗုံးများ ဗမာအစိုးရတပ်များမှ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြောင်း ဤ ဒါဏ်ရာများက သက်သေခံ။
ဇန်န၀ါရီ ၁ရ ရက်နေ့ က ဗမာအစိုးရတပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတုလက်နက်ကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာကဲ့သို့မည်းခြောက်သွားပြီး အသားကိုပါ လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ ကေအိုင်အေ တပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် မီးလောင်ဗုံးကဲ့သို့ ပြင်းထန်ပြီး ဗုံးဆံထိသော နေရာများတွင် လောင်ကျွမ်းသွားသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်။ ပြင်းထန်သော ဓါတုလက်နက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော မီးလောင်ဗုံးများ ကို ကေအိုင်အေ စစ်မျက်နှာပြင်တွင် ဗမာအစိုးရတပ်များမှ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြောင်း ဤ ဒါဏ်ရာများက သက်သေခံနေသည်။
Copy fom - Jade Land
Posted by PNSjapan at 9:00 AM0comments
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာက ဖြတ်ကပ်ညှပ်ဓာတ်ပုံ မြန်မာ့အလင်း သတင်းလွင့်
နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာက ဖြတ်ကပ်ညှပ်ဓာတ်ပုံ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ ဖော်ပြပုံ(ဓါတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာမှာ Air Bagan လေယဉ်တိုက်လို့ သေဆုံးတဲ့ သတင်းဓါတ်ပုံကို ကေအိုင်အေ ဗုံးခွဲလို့ သေကြောင်း သတင်းလွင့်ထားတဲ့ အကြောင်း မြန်မာတိုင်းမ် သတင်းစာက ဖေါ်ထုတ် ပြလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရ သတင်းစာမှာတောင် မကပဲ၊ နိုင်ငံခြား သံရုံးများကို ပေးပို့သော ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ရဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာလဲ ဒီပုံကို သုံးခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီ သတင်းဖေါ်ထုတ်ချက်ကြောင့် ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦး (ကြံ့ဖွတ်အမတ် မဲရှုံး...) ရဲ့ ဇနီး နဲ့ မြန်မာ တိုင်မ်း သတင်းစာ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Australia နိုင်ငံသား ဒန်တလေ နဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်သွားပုံ ရပါတယ်။
Myanmar state media mislabels Air Bagan crash photo as KIA mine blast
Copy from - Duwa Kachin
Posted by PNSjapan at 8:50 AM0comments
ကချင်ဒေသတွင် အဓမ္မုနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရယူရန် ကြိုးပမ်းခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC တောင်းဆို
ကချင်ပြည်နယ် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Kachin Baptist Convention, KBC) သည် ယနေ့ပြုလုပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းခြင်း အစီစဉ်တွင် အစိုးရအား အဓမ္မနည်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူရန် ကြိုးပမ်းခြင်းထက် စစ်မှန်ပြီး တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိနိုင်ရန် “တိကျသော မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ” ချမှတ်ကာ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း အမြန်ဆုံး ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ယနေ့ ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်၏ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း အသင်းတော် ဇုံနယ် ၁၅ ခုမှ ဓမ္မဆရာများ ၁၅၀ ဦးဆောင်၍ မြစ်ကြီးနားမြို့ ဂျော်ဘွမ် (Jaw Bum) ဆုတောင်း တောင်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၀တ်ပြု ဆုတောင်းပွဲ အစီစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ အစိုးရကိုလည်း အချက် (၄) ချက်ဖြင့် တောင်းဆို
Posted by PNSjapan at 1:04 AM0comments
ဗြိတိသျှရုပ်သံသတင်းပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ခွန် ဒီးယမ် အင်တာနက်စာမျက်နှာသတင်မှ
Posted by PNSjapan at 12:58 AM0comments
(ဓာတ်ပုံများ - TNRD)
နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် ပလောင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ်၊ မန်တုံမြို့နယ် လွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဒေသ လူငယ်တွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့ မူးယစ်ဆေးအများအပြား သိမ်းဆည်းရမိထားတာကိုလည်း အဲဒီအခမ်းအနားမှာပဲ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
ပလောင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (TNRD) က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ဒေသတချို့မှာ လှုပ်ရှားနေပြီး အစိုးရတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ﻿﻿﻿﻿
Posted by PNSjapan at 12:54 AM0comments
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) နဲ့ အစိုးရ စစ်တပ်အကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းအချို့၊ သံဃာ အချို့ နဲ့ စာနယ်ဇင်းအချို့က မမှန်မကန် သတင်းတွေထုတ်လွှင့်တယ်၊ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်အပေါ် ပြည်သူ အမြင်လွှဲမှား စေမယ့် သတင်းနဲ့ ကြေညာချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ သမ္မတညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး တပ်မတော်အနေနဲ့ တိကျစွာ လိုက်နာကြောင်း၊ KIA က ဒါကိုအခွင့် ကောင်းယူပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးမှုတွေ လုပ်လာတာတွေကြောင့် ခုခံ တိုက်ခိုက်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေမှာ KIA ရဲ့ချိုးဖောက်မှုတွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး တပ်မတော်ကို အများပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံတကာ အထင် အမြင် လွဲမှားအောင် ရေးသားထုတ်ပြန်နေတယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် ဒေသခံ နိုင်ငံရေးသမား၊ ဒေသနဲ့ အနီးကပ် စစ်ရေးစောင့်ကြည့် လေ့လာသူ၊ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် ခဲ့ကြတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း တာဝန်ရှိသူနဲ့ သတင်းထောက် တို့ကို ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထား ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေက ဒီလိုပါ -
(တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အခြေစိုက် စစ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ)
နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခတွေမှာ KIA က ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနတွေ အကုန်လုံး ဝင်ခွင့်ပြုတယ်၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အရင်က အစိုးရ ကောင်းကြောင်းချည်း ရေးနေတဲ့ ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်တွေတောင် ဝင်ခွင့်ပြုတယ်၊ သတင်းယူခွင့်ပြုတယ်၊ အစိုးရ စစ်တပ်ကလည်း သူတို့ဘက်က ရိုးသားရင် KIA လို ဘာလို့ သတင်းထောက်တွေကို ဝင်ခွင့် မပြုတာလဲ။ သတင်းသမားကတော့ သူတို့ မြင်ရင်မြင်တဲ့ အတိုင်း အဖြစ်မှန်ကို ရေးကြမှာပဲ။
အစိုးရတပ်က အမြှောက်နဲ့ ပစ်လို့ အရပ်သားတွေ သေကြေနေတာလည်း သတင်းထောက်တွေ မျက်စိနဲ့ ကိုယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး မျက်ရည်တောင် ကျခဲ့ရတာပဲ၊ အဲဒီအချိန် အစိုးရ ပြန်ကြားရေးက ဝါဒဖြန့်လို့ကောင်းနေတုန်း၊ နယ်မြေတွင်းမှာ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့မြင်ရတာကို ရေးနေတဲ့ဟာကို အခု သေနက် ကိုင်နေတဲ့
Posted by PNSjapan at 12:35 AM0comments
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်မှ အရပ်သားများနေထိုင်သည့် မရမ်းရွာသို့ အစိုးရတပ်မှ ပစ်ခတ်သည့် လက်နက်ကြီး ကျရောက်ပြီး သားအမိနှစ်ဦး ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးကာ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း သ...တင်းရရှိသည်။
“မနေ့က ညနေ ၇ နာရီလောက်မှာ အမြောက်ကြီးနဲ့ တနာရီလောက် ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ ဗုံးခိုကျင်းထဲမှာ ပုန်းဖို့လုပ်နေတဲ့ မိသားစုကို ထိသွားတော့ အမေဖြစ်သူနဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားလေး သေသွားတယ်။ နို့စို့ကလေးရယ်၊ သူ့ယောက်ျားကလည်း ဒဏ်ရာ ရသွားကြတယ်” ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF)
Posted by PNSjapan at 12:30 AM0comments
လယ်သမား တွေကို ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စားခိုင်းတဲ့ ၀န်ကြီးရဲ့စကား အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေ
လွှတ်တော် အမတ်များသည် ပညာတတ်များ မဟုတ်ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က လယ်သမားများ အကြွေး ဆပ်နိုင်ရန် ထမင်းတစ်နပ် လျှော့စား သင့်သည်ဟု ပြောခြင်းသည် လူ့ဂုဏ် သိက္ခာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ကျေးဇူးရှင်ဟု မှတ်ယူထားသည့် တောင်သူ ဦးကြီးများကို စော်ကားလိုက်သလို ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဦးမြင့်လှိုင်အား နှုတ်ထွက်ပေးပါရန် ဆန္ဒပြ ပွဲများ ပေါ်ပေါက်လာ နိုင်သည်ဟု FNG မှ သတင်းရရှိသည်။
Copy from - Freedom News Group(Burma)
ကာတွန်း - ဟာသဓါတ်ပုံများ, အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
Posted by PNSjapan at 2:47 PM 1 comments
Hka Ya Bum စခန်းတိုက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် စစ်မြေပြင် နောက်ဆုံး အခြေအနေ သတင်း
KIA ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့ Hka Ya Bum တိုက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် စစ်မြေပြင် နောက်ဆုံး အခြေအနေ သတင်းကို KIA နှင့် နီးစပ်သူများ ထံမှ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ သတင်း ပေးပို့လာပါတယ်။ အဆိုပါ စခန်းကို တပ်မတော်မှ ခြေကုပ်ယူထားသော Bum Re Bum၊ M Tnt Bum ၊ Htun Tyel Bum နဲ့ Wai Maw Bum စတဲ့ နေရာ လေးနေရာ စလုံးမှ အမြောက်ကြီးများနှင့် ပိုက်စိပ်တိုက် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ရက်ထဲမှာပင် အကြိမ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အမြောက်များ ပစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက် တပ်မတော်မှ အင်အား ၄၀၀၀ ကျော်ခန့်ဖြင့် ချေမှုန်းရေး ထိုးစစ် ဆင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုက်ပွဲမှာ KIA ရဲ့ ထိခိုက် ကျဆုံးမှု အနေနဲ့ အရာရှိနှစ်ဦး အပါအဝင် စစ်သည် ၃၀ ကျော် ကျဆုံးခဲ့ရကြောင်း၊ KIA မှ စစ်သည် နှစ်ဦးဟာ မိမိကိုယ်ပေါ်မိမိ ဗုံးများ ပတ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသေခံ တိုက်ပွဲ ဝင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ KIA ဘက်က ပြောဆိုသံကတော့ ရန်သူနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ပါက မလိုလားအပ်ပဲ အကျအဆုံး များမှာကို ရှောင်ရှားချင်လို့ ခွာစစ် ဆင်ပေးလိုက်ရပြီး အခွင့်သာပါက တန်ပြန် တိုက်စစ်နှင့် လည်ကောင်း၊ ပျောက်ကြား စစ်နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုပြီး အမှဲ့ချွှေစနစ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မည်
Posted by PNSjapan at 2:35 PM0comments
ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက် မနက်ပိုင်း ၉း၄၀ ကနေ ၁၀း၁၀ ထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ KOREA GREEN FOUNDATION တို့ လူမှုအထောက် အကူပြုဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးခဲ့။
ကိုရီးယား ဂရင်းဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌက ကိုရီးယားဝမ် သိန်းနှစ်ထောင် တန်ဖိုးရှိ ဘက်ထရီ မီးထွန်းစက် အလုံး ၁၀၀၀ ကို ပေးအပ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုစက်များကို လျှပ်စစ်မီး မရှိတဲ့ ဒေသများရှိ ကျောင်းသားနဲ့ ဆေးခန်းများသို့ ပေးလှူမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်တွင် လူ ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက်က လျှပ်စစ်မီး မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့။
သတင်းရင်းမြစ် : ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယား ခရီးစဉ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ
Posted by PNSjapan at 9:05 AM0comments
Tu Maung Nyo - General and USDP Congressman on the same boat
ကာချုပ် ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ကြံ့ဖွံ့အမတ်မင်း (ဗိုလ်) ဦးလှဆွေတို့၏ ကြောင်းတူသံကွဲများပြောဆိုချက်များ
တူမောင်ညို၊ ၂၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၃
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအထူးဒေသ(၂) “ဝ”ပြည်နယ်အစိုးရသည် (KIO) နှင့် အစိုးရ၏ “ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ”တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်သိသော စိတ်ထားဖြင့် အဆိုပြုချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုလာခဲ့သည်။ နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ်များ “ပန်ဆန်း” တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးမည်ဟု နှစ်ဖက်စလုံးသို့ ဖိတ်ကြား အဆိုပြုလိုက် ပါသည်။
ထို့အပြင်၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအထူးဒေသ(၂)“ဝ”ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အထူးဒေသ (၃) (SSA/SSPP) ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသ(၄) (မိုင်းလား) တို့၏ (၃) ဖွဲ့ ပူးတွဲ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်သည်။ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ကို နှစ်ဖက်စလုံးမှ ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပြီး၊ နိုင်ငံရေး စကားပြောကြရမည်။
“ရွှေလီ”မှာ ပြောသည်ထက် “ပန်ဆန်း”မှာ ပြောသည်က သဘာဝပိုကျပါသည်။ ပြည်တွင်း ပြဿနာကို ပြည်တွင်းမှာသာ ဖြေရှင်း အဖြေရှာကြရမည်မ ဟုတ်ပါလော။
ထို့အပြင် “ပန်ဆန်း” တွင် လူချင်းတွေ့၍ ဆွေးနွေးကြသည်က “ ပွင့်လင်းမြင်သာသော Electronic Online မှု” ဆိုသော လွှတ်တော် တိုက်တွန်းချက်ဆိုသည်ထက် ပို၍ အလုပ်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည်။“ ပွင့်လင်းမြင်သာသော Electronic Onlineမှု” ဖြစ်မြောက်ရန် လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်လာဖို့ ၊
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးရွေးကောက်ခံ သမ္မတ ပတ်ဂျွန်ဟေးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးရွေးကောက်ခံသမ္မတ ပတ်ဂျွန်ဟေးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်။Photo by - EMG.
video by -DVB TV News
Posted by PNSjapan at 12:36 AM0comments
“တံတားဦးမြို့နယ် NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်သန္တာ အား တာဝန်မှ ရပ်စဲနိုင်ရေး NLD ပါတီ ၀င် များ လူထု မျက်နှာ စုံညီ အစည်းအဝေး ကျင်းပ ပြုလုပ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်တွင် တံတားဦးမြို့ နယ် အမှတ် (၂ ) ရပ် ကွက် ရေလည်ရပ် တာဘောင်လမ်းရှိ NLD ပါတီ ရုံးခန်း၌ တံတားဦး NLD ပါတီဝင်များ ဦးစီး၍ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်သန္တာအား တာဝန်မှ ရပ်ဆဲနိုင်ရေး အတွက် လူထု မျက်နှာစုံညီ အစည်း အဝေး တစ်ခု ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အစည်းအဝေးတွင် NLD ပါတီ သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော ဦးကိုလေး (အင်းဝ ဂုဏ်ရည်) ၊ ဦးဝင်းဖေ ၊ ဦးခင်မောင်တင့်နှင့် ဦးဝင်းထိုက် ၊ မြို့ နယ် ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးဘိုဖြိုး၊ကျောက် ဆည် ခရိုင် ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ အောင်စိုးမြင့် အပါအဝင် ပါတီ ဝင်
Posted by PNSjapan at 12:20 AM0comments
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ ပန်ဆန်းမြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဝ'ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို KIO ဘက်မှ လက်ခံကြောင်း အင်္ဂါနေ့တွင် အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်ဟု UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူ ဦးအောင်မြင့် က ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ UWSA ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမြို့တွင် နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံမှုကို UWSA က ကြားဝင် ကူညီပေးမည့် အဆိုပြုချက်အပေါ် လက်ခံကြောင်း KIO ဘက်မှ စာပြန်လာခြင်း
Posted by PNSjapan at 12:04 AM0comments
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများ ဖြိုခွင်းခံရခြင်း နှစ်လပြည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများ ဖြိုခွင်းခံရခြင်း နှစ်လပြည့်မြောက်သည့် ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ၂၉ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း ဒေသခံ ပြည်သူများက မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီရှေ့ ရှိ ပုသိမ်-မုံရွာ အဝေးပြေး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရာ လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်ပေးရေး၊ ပြည်သူများ၏ နစ်နာချက် လွှတ်တော်က အမြန်ဆောင်ရွက်၊ သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများအား အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးရေးနှင့် လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆောင်ရွက်သူများအား ဖမ်းဆီးထားမှုများ ချက်ချင်းလွှတ် စသည့် အချက် ၅ ချက်အား တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ယင်းဆန္ဒ
Posted by PNSjapan at 12:03 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီယား အထူးအိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲမှာ မိန့်ခွန်းပြော ( ရုပ်/သံ)
ကိုရီယားနိုင်ငံမှာ ယနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြုံးချမ်း အထူး အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ အထူး ဧည့်သည်
တော် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်းပြောကြားနေတာပါ။ ပြန် လည် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာ-တောင်ကိုရီးယား အနာဂတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆွေးနွေး
သတင်းရင်းမြစ် - ဧရာဝတီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ လီမြောင်ဘတ် တွေ့ဆုံမှု မြင်ကွင်း
video by - DVB TV News
Posted by PNSjapan at 3:14 PM0comments
Tuesday, January 29, 2013 Sithu Linn
ကျနော်တို့ရဲ့ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူ့ရဲ့ ဒဿမ...မြောက် ပြည်ပနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အဖြစ် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံကို တနလာင်္နေ့ကပဲ ဆိုက်ရောက်သွားပါပြီ။
ဒီခရီးစဉ်မတိုင်မီ ဟာဝိုင်ယီကျွန်း အလည်ပတ်ခရီးစဉ်ကတော့ မွန်းကြပ်ရှုတ်ထွေးပြီး၊ ဝေဖန်မှုတွေ အငြင်းပွားစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လက်ရှိမြန်မာ့ နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ ဘ၀အမောတွေကို ယာယီအ ခိုက်အတန့် အားဖြင့် မေ့ပျောက်စေမှာပါ။
ဟာဝိုင်ယီကျွန်းရဲ့ သဘာဝအလှတွေ၊ ကျွန်းသူကျွန်းသားတွေရဲ့ ပျူငှာနွေးထွေးပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြိုဆိုဧည့်ခံမှု၊ ထူးခြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအသောက်တွေက.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်၊ သတိတရ စာတိုပေစ ရေးစရာလေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ တသက်တာအတွက် လှပတဲ့အိပ်မက်တွေလို သူ့စိတ်အာရုံမှာ မမေ့မပျောက် ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တတွေက တိုက်ပွဲထဲကနေရထားတဲ့ ရှားရှားပါးပါး လူထုခေါင်းဆောင်ကို အဲဒီလို အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အပူအပင်ကင်းကင်း ရှိနေတာ မြင်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ဟာ တိုင်းပြည်အတွင်းမှာသာမက၊ တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာပါ အလိမ်အညာတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးရှာတွေ၊ ကျင့်ဝတ်ပျက်နေတဲ့.. နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ ဆုံဆည်းနေရတော့ ကျနော်တို့ရင်ထဲ မကောင်းလှဘူး။ အဲလို ကျင့်ဝတ်ပျက် အတ္တ၀ါဒီတွေဆိုတာ..တိုင်းပြည် အတွင်းအပြင်က မြန်မာလူမျိုးတွေ သာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ အစိုးရတွေပါ ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ကို ၀န်းရံပြီး ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေကို ပါးပါးလှီးနေလို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒါတွေ ကျနော်တို့ မြင်နေရလို့လည်း ဒီလိုစာမျိုး ရေးဖြစ်သွားတာ။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တောင်ကိုးရီးယား ခရီးစဉ်
Posted by PNSjapan at 3:09 PM0comments
ကိုရီးယား ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း အတွက် မြန်မာလုပ်သား ၄၉၀၀ ကျော် ခေါ်ယူရန်ရှိ
ကိုရီးယား နိုင်ငံရှိ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ အတွက် မြန်မာလုပ်သား ၄၉၀၀ ကျော်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ခေါ်ယူ သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အလုပ်ခေါ်ယူရေး အတွက် ဌာနေ ကိုယ်စားလှယ် ထားရှိ ထားတဲ့ ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက် အရ သိရပါတယ်။ အခုလို ကိုရီးယား နိုင်ငံ အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှ လုပ်သားများ ခေါ်ယူရာမှာ EPS Topisk စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီး သူများကို အလုပ်သမား ညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာန အောက်ရှိ အစိုးရ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ ခေါ်ယူလျက် ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ခေါ်ယူရာမှာ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ခေါ်ယူမှု ပိုမို များပြားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလို လုပ်သား ခေါ်ယူမှု ရှိတဲ့အတွက် လာမယ့် မတ်လ အတွင်း မှာလည်း
Posted by PNSjapan at 9:04 AM0comments
လိုင်ဇာကို သိမ်းရုံနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်လို့ ဒေါ်ဒွဲဘူ တုန့်ပြန်ပြောဆို
photo: RFA - KIO စစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့ကို မြင်တွေ့ရစဉ်။
KIO ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာကို သိမ်းပိုက်ပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ကချင်ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ကန့်ကွက်တယ်လို့ ကချင်တိုင်းရင်းသူ အင်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူက ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျင်းပပြီးချိန်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် KIA လိုင်ဇာဌာချုပ်ကို အရင်သိမ်းပိုက်ပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကို ကချင်ပြည်နယ်၊အင်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူ က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်
Posted by PNSjapan at 8:41 AM0comments
အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်ဆန်းမှာ ဆွေးနွေးဖို့ UWSA ကမ်းလှမ်း
အစိုးရနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ UWSA က ကြားဝင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ် လို့ ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း ၀ပြည်သွေးစည်း ညီညွှတ်ရေးအဖွဲ့ UWSA က ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ RFA ကို ပြောပါတယ်။
နှစ်ဖက် စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ အဆုံးသတ်ပြီး အပစ်ခတ်ရပ်စဲနိုင်ဖို့အတွက် UWSA ဌာနချုပ် ပန်ဆန်းမှာ ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
UWSA အဖွဲ့က ပေးပို့တဲ့အဆိုပြုလွှာကို ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ နဲ့ KIO အဖွဲ့တွေထံ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ရက်နေ့က ပေးပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ UWSA အဖွဲ့က ပြောခွင့်ရ ဦးအောင်မြင့် ကပြောပါတယ်။
KIO အဖွဲ့ကတော့ အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုကို တဖွဲ့ချင်းမဆွေးနွေးပဲ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အစိုးရဖက်ကို အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။ အဲဒီအချက်အပေါ် UWSA အနေနဲ့မူအားဖြင့် သဘောတူပေမဲ့ UNFC ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်နေတာကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ ဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စကို မလိုလားကြောင်း မိမိပြည်တွင်းရေးကိစ္စကို ပြည်တွင်းမှာသာ ဆွေးနွေးဖို့ UWSA က အကြံပြုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Copy from - RFA Burmese
Posted by PNSjapan at 12:13 AM0comments
video: NLD-LA Kr
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယား ခရီးစဉ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ
အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယား ခရီးစဉ် မှတ်တမ်းသတင်းများ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
Posted by PNSjapan at 8:52 PM0comments
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ အပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ တစ်ပတ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံး ပစ်ခတ်မှုတွေ ရှိနေစဲဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ပိုင်း စစ်မြေပြင်တင်မက နေပြည်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာ နှစ်ဖက်အငြင်းခုံတဲ့ ဆွေးနွေးသံတွေ ညံ့နေခဲ့ပါတယ်။ KIO နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းပွဲတွေ ပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်လို့ အစိုးရဖက်က ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် KIO ကတော့ နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်တဲ့ UNFC (United Nationalities Federal Council) ခေါ် ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့ပဲတဆင့် ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး UNFC ရဲ့  တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတဦးဖြစ်တဲ့ PPNO (PaO People's Liberation Organization) ပအို့ဝ် အမျိုးသား တပ်မတော်ရဲ့  ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ကို ဦးသန်းလွင်ထွန်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ကချင်ကိစ္စက ဦးခွန်ဥက္ကာတို့ရဲ့  UNFC ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသားများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီနဲ့ပဲ ဆွေးနွေးပါဆိုပြီး အခု လက်လွှဲတဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ။
ဦးခွန်ဥက္ကာ ။ ။ တကယ်တော့ အခုမှ လွှဲတာမဟုတ်ဘူး။ တော်တော်တော့ ကြာပြီ။ ကျနော်တို့အထဲမှာ ခြောက်လလောက်တော့ ရှိပြီ။ ကချင်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကိစ္စ။ ကချင်အဖွဲ့နဲ့ နေပြည်တော်အစိုးရနဲ့ သူတို့အချင်းချင်း နှစ်ဖက်ထဲနဲ့ ညှိဖို့၊ ဆွေးနွေးဖို့တော်တော်လေး ခက်ခဲသွားတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို တွေ့ရတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ရံဖန်ရံခါ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် အချိန်အဆက်မမီတာပေါ့။ အစိုးရက ပြောတာတမျိုး၊ တပ်မတော်ဘက်ကတမျိုး။ နောက်ပြီးတော့ တဖန် ဆွေးနွေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း ရံဖန်ရံခါ တပ်မတော်အပေါ်မှာ ပြောတာဆိုတာ မတူတဲ့အခါကြတော့ တပ်မတော်က တမျိုးလုပ်နေတဲ့အခါကြတော့
Posted by PNSjapan at 8:28 PM0comments
“ဒီမိုကရေစီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေ ကျမကို မေးတဲ့အခါ ကျမက လွတ်လပ်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို နှစ်ဘက်မျှအောင် ပေးနိုင်တဲ့စနစ်တခုလို့ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိပါတယ်။
လုံခြုံမှု ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ အစိုးရတွေက လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ကို ငြင်းပယ်လေ့ ရှိပါတယ်။
လွတ်လပ်မှုဆိုတာကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူတွေရဲ့ လုံခြုံမှုတွေ ဖျက်ဆီးခံရတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။”
Posted by PNSjapan at 8:22 PM0comments
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင် တရုတ်မှာ ယာယီထိန်းသိမ်းခံရ
﻿ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အခြေစိုက် လှုပ်ရှားနေသည့် ရခိုင့်တပ်မတော်မှ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းမြတ်နိုင်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိစဉ် သောကြာနေ့က ခေတ္တ ထိမ်းသိမ်း စစ်ဆေး ခံခဲ့ရပြီး ယခုအခါ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကူမင်းလေဆိပ်တွင် ထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရခိုင့်တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူး ကျော်ဟန်က ပြောသည်။
“ဒီဘက်က မဟာမိတ်တွေက သိတယ် ဆိုရင်ပဲ (သူ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်) တော်တော်ကြီးကို ကြိုးစားပြီး ကိုယ်တို့ လုံခြုံတဲ့နေရာကို ရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်နိုင်လိုက်တယ်” ဟု ဗိုလ်မှူး
Posted by PNSjapan at 7:41 PM0comments
သင်္ဃန်းကျွန်း မိချောင်းကန်က မူလမြေပိုင်ရှင်တွေ ရှင်ဖွင့်ကုန်ကြပြီ
video by - Maha Mingyi
ရန်ကုန်တိုင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မိချောင်းကန် အပိုင်း(၁) အပိုင်း(၂) အား စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၄င်းရပ်ကွက်များမှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ လူငယ်ခေါင်ဆောင်းများသည် ဒီမိုကရေစီအရေး အုံကြွမှုတွင် ဦးဆောင်သော နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက် အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ၄င်းရပ်ကွက်များအား လက်ညိုးထိုး ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပြီး ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအား ရန်ကုန်မြို့နှင့် ဝေးလံသော တောင်ဒဂုံ၊ မြောက်ဒဂုံ သို့ စစ်ထရပ်ကားများဖြင့် ပို့လွှတ်ခဲ့ခြင်း ခံခဲ့ကြရသည်။ လူငယ် အမြောက်အများ ဖမ်းဆီးခြင်း
Posted by PNSjapan at 6:47 PM0comments
၉-၂-၂၀၁၂ နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် နိုင်ငံတော်အမျိုးသား စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း ကို ဆွေးနွေးစဉ် မကွေးတိုင်းမဲဆန္ဒယ် အမှတ် (၁၂)၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ (ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ) က
“အခု ကျနော် ပြောတာဟာ ပါတီကိုယ်စား ပြောတာပါ” ဟု အစချီပြီး “ရခိုင်ကိုယ်စားလှယ် ၅ ဦး ပြောရင် ၅ ဦးလုံး လျှပ်စစ်တောင်းတယ်၊ ကျောက်ဖြူ လူထုအစည်းအဝေး မှာတုန်းကလည်း ရွှေဂက်စ်က လျှပ်စစ်မရရင် လူထုဆန္ဒပြမယ်လို့ ပြောတယ်။ မိုးကုတ်က ကျောက်ထွက်လို့ မိုးကုတ်ကို ပေးရမလား၊ ရေနံချောင်းက ရေနံထွက်လို့ ရေနံချောင်းကို ပေးရမလား၊ ကိုယ့်ဒေသ ထွက်တိုင်း ပေးရမလား” လို့ နောက်လှည့် လက်ပြပြီး ဒေါမာန်အပြည့်နဲ့ ပြောသွားပါတယ်။
အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး ,အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
မဟာလူမျိုးကြီးစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေ လိုလူပါ။ မင်းတို့ ပထွေး ပြည်တွင်းစစ် နှစ် ၆၀ ကျော် နှိပ်စက်ခဲ့လို့ ချွတ်ခြုံမွဲပြာခဲ့ကြရတဲ တပြည်ထောင် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားတွေကို မစာနာ
(တိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့ +တိုင်းဒေသ)မှာ တိုးတက်မှုတွေ ညီမျှ...ရဲ့လါး ?????
အာဏာရှင်စိတ်မကုန် မင်းလိုတယူသန် လူမျိုးကြီးစိတ်တွေကြောင့် ... ညီမျှရေး သင့်မြတ်ရေး ...ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ရိုးသားကြတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ အားနာပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 6:15 PM0comments
(၆၆)နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်တွင်(၆၆)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲများကို ဂျပန်ရောက် ပြည်ထောင်စုဘွား တိုင်းရင်းသားများ အင်အားစုများတို့မှစုပေါင်း၍ အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းနှင့်တကွ လူကြီးမင်းများ၏အဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အား အဆိုပါအခမ်းအနားတို့ တက်ရောက်အားပေးပါရန်ရိုသေလေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ 2013February (10,Sunday)
အချိန်။ ညနေ 5:30 pm (နေရာယူခြင်း)
ညနေ 6:00pm to 20:00 hr ( ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားအစီအစဉ် )
ညနေပိုင်း 20:00 hr to 21:30hr ( ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲ အစီအစဉ်)
နေရာ။ Toshima-ku, Ikebukuro ,KUMI CENTER -6F
၀င်ကြေး။ အခမဲ့ (Free)
(၆၅)နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ကျင်းပရေးကော်မတီ(ဂျပန်)
၀၉၀ ၆၀၂၅ ၄၆၂၉၊ ၀၉၀ ၉၈၃၁ ၇၁၉၂ ၊ ၀၇၀ ၆၄၆၀ ၈၈၇၄၊
Posted by PNSjapan at 5:35 PM0comments
လဂျားယန် နဲ့ လိုင်ဇာ ကြား လ၀ါးယန်ရွာထိပ်မှာ ဒီနေ့ တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်...
video by - Jade Land
Posted by PNSjapan at 4:57 PM0comments
ရုပ်သံမူရင်း - ခွန် ဒီးယမ်
Posted by PNSjapan at 4:52 PM0comments
အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ၀တ်စားထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ကုမ္ပဏီ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ သူမကို ရည်ရည်မွန်မွန် မိတ်ဆက်ရင်း ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာကဒ်ကို ပေးခဲ့တယ်။
သူမကလဲ သဘောရိုးနဲ့လို့ထင်မှတ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့ လိပ်စာကဒ်ကိုလက်ခံပြီး ကားပေါ်ပြန်တက်လို့မောင်းထွက်ခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီယောက်ျားဟာ တခြားလူရည်သန့်ယောက်ျား တစ်ဦးမောင်းတဲ့
Posted by PNSjapan at 4:44 PM0comments
ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး ကို သနားတဲ့ အကြည့် နဲ့ကြည့်နေတဲ့ အားကစားဝန်ကြီး
ဇန်န၀ါရီလ ၂၇ရက်၊ ၂၀၁၃
နိုင်ငံတော် သမ္မကြီးခင်ဗျား ဒီတခါတကယ်ပဲ လုပ်တော့မှာလားလို့ မေးပါရစေ။ ဆိုလိုတာက အခုလောလောဆယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံကြီးကို တကယ်ပဲအရေး ယူတော့မှာလားလို့ မေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
ပာပေါင်း များနေပြီးဘာတခုမှ လက်တွေ့ လုပ်ပြတာမရှိသေးလို့ မေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက Good Governance, Clean Government လို့ အမြဲပြော၊လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေကို အရေးယူမယ်လို့ ပြောပြောပြီး ဘာမှ လုပ်တာမတွေ့သေး လို့ မေးနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟော အခုတခါတော့ တကယ်လုပ်တော့မှာလားဟင်လို့ မေးနေရခြင်းဖြစ် ပါတယ်။သမ္မတကြီးမှာ လက်အောက်က ဝန်ကြီးတွေ၊ ဝန်ကြီးဌာနတွေ မှာလာဘ်စား မှုတွေ၊ ခြစားမှုတွေ၊ အကျင့် ပျက်နေတာတွေ ဖြစ်နေ ပြီလားဆိုတာမျိုး ကိုဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ သိအောင် လုပ်ထားပါသလဲ၊ သမ္မတကြီးမှာ Check, Recheck, Double Check n Counter Check တွေကောရှိပါသလား။
ကိုယ်တိုင် သိအောင် လုပ်တာမျိုးလား၊ တိုင်စာရောက်မှ စစ်ဆေးတာမျိုးလား။ ပုံစံ ကြည့်ရတာ တော့ တိုင်စာတက်လာမှ စစ်ဆေးတာမျိုး လုပ်နေပုံရ တာမျိုးတွေ့နေရလို့ပါ။
တစ်ခုပြောပါရစေ။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ၊ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကို အတွင်းကျကျ သိနေကြတဲ့ အောက်ခြေ ဝန်ထမ်းအများစုကတော့ အမည်နာ မဖေါ်ပြပြီး ရေးရတဲ့တိုင်စာမျိုးကို မရေးရဲကြပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ပြန်အတွယ်ခံနေရလို့ပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အမည်နာမ မဖေါ်ပြရဲတော့ပဲ၊ ဝန်ထမ်း တစ်စုဆိုပြီး တိုင်နေ ရတော့တာပေါ့ဗျာ။ သမ္မတကြီးတို့ကလည်း ဝန်ထမ်းတစ်စု ဆိုပြီးတိုင်လာတဲ့ တိုင်စာ ရောက် လာတာနဲ့၊ ပြစ်စာပဲဆိုပြီး၊ အမှိုက်ပုံးထဲ ပို့လိုက်ကြတော့ အခုလိုမျိုး အကျင့်ပျက်မှုတွေ၊ ခြစားမှုတွေ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေ၊ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ မှာ၊ ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတော့ တာပေါ့ ။
မယုံဘူးလား သမ္မတကြီး။ တခုလောက် အရင်ထုတ်ပြပေးပါမယ်။ နောက်ထပ် ထုတ်ပြလို့ တာတွေလည်း ရှိပါသေးကြောင်း ကြိုပြော ထားပါရစေ။
အားကစားဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းရဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ လာဘ်စားမှု၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ပဒေအတိုင်း မဆောင်ရွက်ပဲ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊ ဒုသမ္မတ နှစ်ယောက်စလုံး၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ စသုံးလုံးညွှန်ချုပ်ကြီး၊ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့မှုးကြီးတို့ အားလုံးကို မင်းတို့ကောင်တွေ လောက်တော့ တင့်ဆန်း တို့က သနားတယ်၊
ဟောဒီမှာပါဗျာ တင့်ဆန်းရဲ့ ရိုက်ချက်များ တင့်ဆန်း အားကစား ဝန်ကြီးဖြစ်လာတော့ ၂၀၁၃ မှာလုပ်မဲ့ (၂၇)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ် ကျင်းပသွားမယ် ဆိုတဲ့ဂွင် အကြီးကြီးကစောင့်လို့ ကြိုနေတော့ ကျိတ်ပြီးပြုံးနေတာတဲ့၊ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံ အနေနဲ့ လုပ်မယ်ဆိုတော့ နေပြည်တော်မှာတင် အားကစားရုံနဲ့ အားကစားကွင်းပေါင်း ( ၁၁ )ခုတိတိ၊ အသစ်ကနေစြ­ပီး ဆောက်ရတော့ မှာလေ။
ဘာကြောင့် ကျိတ်ပြီးပြုံး သလဲ သိလား သူမှာ Ace ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္မဏီကြီးကရှိနေပြီးသားလေ။ကဲဒီတခါတော့ ...တကယ်ထုတ်ပြပါပြီ ..
အားကစားဝန်ကြီး၊ ce ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္မဏီပိုင်ရှင်ကြီး မောင်တင့်ဆန်းရဲ့
Posted by PNSjapan at 4:16 PM0comments
(26/1/2013)ရက်နေ့ နော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလို မြို့တော် တွင် ကချင် နှင့် အခြားသောမြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ စုဝေးကာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအား (ကချင်ဒေသထိုးစစ်) အားဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ဆန္နပြ တွင် ရှေ့နေဦးမဟော်ခွန်ဆာ မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။
Posted by PNSjapan at 9:10 AM0comments
ရှမ်း/မြောက်တွင် ပြည်သူ့စစ်များ ဗမာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ဇန်န၀ါရီ (၂၇) တနင်္ဂနွေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ရှမ်းပြည်...အခြေစိုက် တပ်မဟာ (၄) လက်အောက်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေဖြစ်သော ဘန်ဆိုင်း ဒေသ ဒွမ်အော် ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာစစ်တပ် ခလရ (၂၄၂) ကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) မှ မျိုးချစ် ပြည်သူ့စစ်ရဲဘော်များ ဇန်န၀ါရီ (၂၇) မနက်ပိုင်း (၁၀း၀၀) နာရီခန့်တွင် ဆီးကြို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ (၃) ဦး သေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Posted by PNSjapan at 9:07 AM0comments
တို့တိုင်းနိုင်ငံ ပြည်မြန်မာမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ (ပေးစာ)
ကျနော့်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှ အမှန်တရားများကို သိရှိနိုင်စေဘို့ ဒီစာကို ရေးလိုက်ရပါတယ်- ကျနော်ဟာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်က စက်ရုံမှူးဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံမှူးဟောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ - ကျနော်သိတာလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ - ဒီစာလေးကို ရေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစိုးသိန်းဟာ - သူတို့အပတ်စဉ်မှာ ထူးချွန်ဆုရခဲ့တဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းအရာရှိကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် - သူအနေနဲ့ သမာသမတ်ရှိရှိနဲ့ဆုရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့ထက်အမှတ်ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ကလိန်ကကျစ်ကျပြီး ဆုရယူခဲ့တယ်ဆိုတာ - တချို့ကသိချင်မှသိမှာပါ၊ ကျနော်တို့ ကတော့ တစ်ကျောင်းတည်းအတူတူတက်လာခဲ့ဖူးတော့ သူကလိန်ကကျစ်လုပ်ခဲ့တာကို ကျောင်းမှာ ကတည်းက သိခဲ့ပါတယ်၊
ဦးစိုးသိန်းဟာ တပ်မတော်မှာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလ တစ်လျှောက်မှာလည်း - ဟိုအရင်ကျောင်းတုန်းကလိုပဲ လူကြီးတွေကို လေလုံး လှလှလေးတွေနဲ့- ယုံအောင်ဖြီးတတ်တာကြောင့် - ရုံးကြီးနဲ့လူကြီးတွေ အနားမှာပဲ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး နေခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ပင်လယ်ပြင် စစ်ဆင်ရေးနဲ့ စစ်သဘောင်္အတွေ့အကြုံဘာတစ်ခုမှ မရှိခဲ့ဘဲ လူကြီးအကြိုက် လိုက်ပြော၊ ဖော်လံဖားပြီးလေနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် - ဒီအဆင့်အထိ ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ
Posted by PNSjapan at 8:43 AM0comments
video by - Thein Zaw
Posted by PNSjapan at 1:27 AM0comments
video by - Myu Shayi
Posted by PNSjapan at 1:09 AM0comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ (ဇင်းမယ်မြို့) ကို ရောက်နေတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသား အများအပြားက တရုတ်၊ အမေရိကန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေရှေ့မှာ သောကြာနေ့က ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ကချင်ဒေသ တိုက်ပွဲများနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ ဘယ်လို ခံစားရတယ် ဆိုတာကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာပါ။
Posted by PNSjapan at 11:38 PM0comments
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အလှမ်းဝေးနေအုံးမည့် ပြည်ထောင်စု
ပါတီကိုယ်စား ပါးစပ်အဌားပြော မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်
Posted by PNSjapan at 2:54 PM0comments
လေကြောင်းမှ ဗုံးပဒေသာများဖြစ် ခါယာဘုန် တောင်ကုန်းတွင် အသုံးပြု...
Myanmar forces used Cluster
ခါယာဘုန် တောင်ကုန်းအား အပြီးသတ် သိမ်းပိုက်မှုတွင် မြန်မာအစိုးရတပ်က ကလပ်စတာဟု ခေါ်သည့် ဗုံးပဒေသာ များကို လေကြောင်း စစ်ဆင်ရေးမှ တစ်ဆင့် သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု လိုင်ဇာသို့ရောက်ရှိ နေသည့် အမေရိကန် သတင်းဌာန တစ်ခုမှ ဗီဒီယို သတင်းထောက် ဒေးဗစ် ပီရာယီက FNG ကို ပြောသည်။
Posted by PNSjapan at 2:43 PM0comments
၀မ်းနည်းစွာ ဟစ်ကြွေးနေတဲ ကလေးတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တောင်းဆိုသံ
" အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ ကချင်ပြည် "
ကျေးဇူးတင်တယ် .Ko Nay Myo Zin
Posted by PNSjapan at 2:00 PM0comments
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့နယ်၌ တပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၃ ကြိမ်ဖြစ်
စနေနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 26 ရက် 2013 ခုနှစ်
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ပင်လုံမြို့နယ်အတွင်း၌ ရှမ်းပြည...်တပ်မတော် RCSS/ SSA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ ယခုတပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲ ၃ ကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွါး ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
“၁၉ ရက်နေ့မှာနဲ့ ၂၁-၂၂ ရက်နေ့တွေမှာ ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွါးတယ်။ တောင်ပိုင်းသျှမ်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ပေါ့။ ဆနိန်းရွာဘက် ကပေါ့။ အခုလဆန်းပိုင်းက သျှမ်းတပ်ဖွဲ့က စစ်သား ၂ ယောက်ဆိုင်ကယ် စီး တာကို မြန်မာစစ်တပ်ကတွေ့တော့ လိုက်ပစ်တယ်။ သျှမ်းစစ်သား ၂ ယောက်ကလဲ ဆိုင်ကယ် ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးတယ်။ သူတို့ဆိုင်ကယ် ဗမာစစ်သားသိမ်းသွားတယ်။ အဲဒီကစပြီးတော့ သျှမ်းတပ်က ပြန်စောင့်ရင်းနဲ့ အခုလို တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာ” ဟု ပင်လုံရောက် ဆနိန်းဒေသခံကပြောသည်။
ပင်လုံမြို့နယ် ဆနိန်းအုပ်စုအတွင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ရလခ တိုင်း လက်အောက်ခံ ခလရ ၂၉၆ တပ်ရင်းမှ အင်အား ၈၀ ခန့်က စစ်ကြောင်း ၂ ကြောင်း ခွဲကာ လှုပ်ရှားကြောင်း၊ ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က လည်း ဆနိန်းအုပ်စု ကောင်းလုံးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး သျှမ်းတပ်ဖွဲ့က လမ်းကူးစဉ် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အဆိုပါစစ်ကြောင်းက လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သျှမ်းတပ်ဖွဲ့က တုန့်ပြန်ပစ်ခတ်ခြင်း မရှိကြောင်း အဆိုပါ ဒေသခံက ပြောသည်။
“၂၁ နဲ့ ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက ပင်လုံအနောက်မြောက် ဆနိန်းအုပ်စုနဲ့ကပ်ရက် လွယ်ခူးကျေးရွာအုပ်စု ဘက်မှာလဲ သျှမ်းတပ်ဖွဲ့ကို မြန်မာစစ်ကြောင်းက လိုက်ပစ်တယ်။ အဲတာတော့သျှမ်းဘက် ကပြန်ပစ်တယ် ။ တိုက်ပွဲ ၂ ကြိမ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က ၂ ယောက် ဒဏ်ရာရတယ်။ သေတာတော့ မရှိဘူး”
Posted by PNSjapan at 1:43 PM0comments